बिहे पछि आचलको भेट पल सङ्ग ….( भिडियो सहित ) – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बिहे पछि आचलको भेट पल सङ्ग ….( भिडियो सहित )
बिहे पछि आचलको भेट पल सङ्ग ….( भिडियो सहित )
3,897 1 minute read
काठमाडौं : मिडियामा पल शाह र आंचल शर्माको प्रेमको विषयले निकै स्थान पाइरहेको छ। उनीहरूले दिएको हर अन्तरवार्तामा यस कुरालाई जोडिएको हुन्छ। तर, उनीहरू भने आफुहरू बिच कुनै प्रेम सम्बन्ध नभएको बताउँदै आएका छन्। दर्शकले उनीहरूको जोडीलाई खुबै रुचाइरहेका छन्। उनीहरूलाई वास्तविक जीवनमा पनि एक भएको हेर्न चाहने दर्शकको जमात राम्रै देखिन्छ। फिल्ममा होस् वा म्युजिक भिडियोमा उनीहरूको केमेष्ट्रीलाई दर्शकले प्रशंसा नै गरिरहेका हुन्छन्।
प्राय: सामाजिक संजाल र फेसबुकमा पोस्ट गरिएका समाचारहरुको कमेन्टहरूमा उनीहरू वास्तविक जोडी भइदिए हुने भन्ने धेरैले आशा राखेका थिए। त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, उनीहरूलाई वास्तविक जीवनमा जोडी भएको हेर्न चाहने धेरै थिए।
केहि समय आगाडी निर्देशक भट्टराईले पल र आँचललाई फिल्म सँगै काम गराइसकेका छन्। सँगै काम गर्दा पनि उनीहरूबीच त्यस्तो केही छ जस्तो नलागेको प्रदीप बताउँछन्। भन्छन्, ‘सँगै काम गरियो तर उनीहरूबीच त्यस्तो केही छ जस्तै लागेन।’ उनीहरूको जोडीलाई दर्शकले धेरै रुचाएका छन्। त्यसैले पनि उनीहरू वास्तविक जीवनमा पनि जोडी भएको हेर्ने प्रदीपको पनि चाहना भएको बताउँछन्।
त्यस्तै अजयले पल र आँचलसँग फिल्म ‘जोनी जेन्टलम्यान’मा सँगै काम गरेका छन्। सँगै काम गर्दा उनीहरूबीच प्रेम भएको जस्तो नलागेको अजय बताउँछन्। भन्छन्, ‘सँगै काम गर्दा त उनीहरूबीच प्रेम छ जस्तो लागेन। उनीहरू असल मित्र हुन् जस्तो लाग्छ मलाई।’ पल र आँचलले एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझेको उनले बताए।
यसै क्रममा अर्जुन पल र आँचलको जोडीलाई एक सुन्दर प्रेम जोडीका रूपमा लिन्छन्। भन्छन्, ‘हामीले हेर्दा त निकै सुहाएको देखिन्थ्यो । अब बाहिरी कुरालाई लिएर प्रतिक्रिया दिनुभन्दा उनीहरूको मन मिलेको भए सधैँ एक हुन्थे होला नि ।’ अर्जुनलाई पनि उनीहरू वास्तविक प्रेमी-प्रेमिका भएको हेर्ने मन चाही थियो ।
प्रेमी उदित श्रेष्ठसंग बिवाह गरेपछि आंचल नयां जीवनको शुरुवात गर्दैछिन् । यता पल शाहसंगको सम्बन्ध भने छुटेको छल । सायद त्यही भएर त होला पलले आंचललाई आफ्नो सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामबाट अनफलो गरेका छन् । हुनत् आंचलको फ्रेण्ड लिष्टमा पनि पल छैनन् । कारण के हो त् ? भिडियोमा हेर्नुस्
प्रे,मिकाले फोन गरेर बो,लाएपछी भे,ट्न पुगेका युवा ला,स भएर फ,र्के
भाइरल अर्जुन विकलाई साथ दिन पुगिन् यती राम्री युवती [भिडियो सहित]
मनकारी नायिका एलिजा, कोरोना म’हामा’रीमा गरिब र दिनदुखीलाई खाना खुवाउन निस्किन् (भिडियो)